I-crocodile fish, intlanzi ekwaziyo ukuphuma emanzini | Ngeentlanzi
Kukho iintlanzi ezifumana igama lazo ngendlela ezijongeka ngayo, njenge iintlanzi zamatye, kwaye ngenxa yokuba zifana nezinye izilwanyana, ezinje nge Iintlanzi. Le yimeko ye intlanzi yengwenya. Njengoko igama layo lisitsho, yintlanzi ebonakala ifana kakhulu nengwenya. Igama layo lenzululwazi ngu I-Atractosteus spatula. Idume, hayi ngenkangeleko yayo kuphela, kodwa ngenxa yokuba inako ukungena nokuphuma emanzini. Iyakwazi ukuya kuthi ga kwiiyure ezimbini ubuninzi ngaphandle kwamanzi ngaphandle kwengxaki. Ngokwenene yintlanzi enomdla ekufuneka ikwazi.
Kweli nqaku siza kuchaza yonke into malunga nale ntlanzi ingwenya, ukusukela kwiimpawu zayo eziphambili ukuya ekutyeni nasekuveliseni kwayo. Ufuna ukwazi okungakumbi?
3 Ukutya iintlanzi zengwenya
5 Uphuhliso lweminwe
Ukukwazi kwale ntlanzi ukungena nokuphuma emanzini kuyinto emnandi njengoko ikunika ukusebenza ngeendlela ezininzi ebomini bakho. Iintlanzi zilinganiselwe kwimeko-bume yasemanzini kwaye, nokuba kukho ukutya kufutshane nabo, inyani yokuba iphumile emanzini sele ikuthintele ukuba ungafikelela kuyo.
Imbonakalo yengwenya ibonakala ngakumbi ebusweni, njengoko inomphetho omde kunye nomhlathi omfutshane omfutshane. Mkhulu kakhulu ngobukhulu, ifikelela phantse kwiimitha ezi-3 ubude kwaye inobunzima obungama-200 eekhilogram. Ngokwenene kukho abantu abathi, xa beyibona, baphazanyiswe ziingwenya zokwenene. Amabhinqa ahlala emakhulu kunendoda, njengakwezinye iintlobo zeentlanzi.
Umbala wabo ulusu limdaka mnyama kwicala elingaphezulu kwaye umbala omthubi ngakumbi kumazantsi. Yiza, iyafana nengwenya iphela. Isizathu soku kufana asinangcaciso. Izirhubuluzi kunye neentlanzi azabelani ngeempawu ezininzi kangangokuba ezi ntlobo zimbini ziyafana. Ineempiko ezinamabala amdaka kwaye ezinye zinomgca ocacileyo emacaleni.
Intlanzi yengwenya ihlala ihlala kumachibi amakhulu, imilambo kunye neminye imigxobhozo. Bahlala emanzini amnandi, nangona bekwazi ukuyenza emanzini anetyuwa. Indawo yokuhambisa igubungela iindawo ezinkulu zaseMelika. Inokufumaneka kwi imilambo imilambo njengeOhio neMississippi. Ikwahlala kumachibi amakhulu anje nge-Eire neMichigan (eyaziwa njengelinye lamachibi amakhulu emhlabeni) nakwiindawo ezinje ngeAlabama, Tennessee, Arkansas, Oklahoma, Georgia, Florida naseTexas.
Ikhetha amanzi angenzulu ukuze abonakale ngcono kwixhoba lawo. Amanzi avulekileyo ayizintandokazi zakhe, njengoko enegumbi elininzi lokulungiselela uhlaselo. Njengesiqhelo, zihamba emanzini ubunzulu bazo buphakathi kwe-3 kunye ne-5 yeemitha kwaye amanye amanzi aphuma emanzini amileyo.
Njengokuba bekwazi ukuphuma emanzini iiyure ezimbalwa, banokufumaneka kufutshane nokuntywila elangeni ngokungathi ziifudo. Zibekwa ecaleni kwemithi, ibrashi, okanye iinkuni eziwela emanzini. Kuba luhlobo lonxweme, siyakuhlala silifumana kufutshane neebhanki apho kunokubakho ukhula. Kunqabile ukuzibona kwiindawo ezifumanekileyo apho zingenakukhuseleka kwaphela.
Ukutya iintlanzi zengwenya
Njengoko bekulindelekile, Yintlanzi enokutya okutyayo kuphela. Bathanda ukutya ezinye iintlanzi ezincinci kunabo. Nangona engatyi nje ezinye iintlanzi ezincinci, kodwa xa indlala ihlasela, utya phantse nantoni na. Bayazithanda ii-crustaceans ezinje nge shrimp kunye nononkala kwaye banokutya iintaka zasemanzini, iifudo, kunye nezilwanyana ezincinci.
Nokuba indlala iyacinezela kwaye akukho zibonelelo zaneleyo zikujikelezileyo, ingatya ukubola okusendleleni. Nangona iyintlanzi ebonakala icotha ngenxa yobukhulu bayo kunye nobunzima bayo, iyakwazi ukuhlasela ixhoba layo ngesantya esikhulu nangokuqiniseka.
Olu hlobo lunendlela yokuziphatha engaqhelekanga kwezinye iintlobo zentlanzi. Umzekelo, banomkhwa woku ukuqokelela inani elikhulu lamadoda kumanzi anzulu nakufutshane notyani. Kulapho babekwa khona, nganye nganye, ukukhuphisana ukubona ukuba ngubani ophumelela umntu obhinqileyo. Kuya kufuneka sazi ukuba abantu basetyhini banokuvumela ngaphezulu kwendoda enye ukuba ichumise amaqanda. Ke ngoko, isizathu sokuba bakhuphisane sibaluleke kakhulu.
Xa iimazi zizalela amaqanda, zinamathela ematyeni okanye kutyani ukuze zikhule. Amaqanda aluhlaza kwaye abomvu. Indlela yokubambelela kwimigca esezantsi kukusinda. Kwimeko yokubonwa ngamanye amarhamncwa kunye nokuba semngciphekweni wokuginywa, kunjalo Enye indlela enkulu yokuzikhusela: zinetyhefu. Ukuba esinye isilwanyana sifunza amaqanda, siya kuba yityhefu.
Ukutyala amazimba kwenzeka ngaphezulu okanye ngaphantsi phakathi kwenyanga kaFebruwari ukuya kuJuni. Azinandawo iqingqiweyo, kodwa umhla ngamnye uyahluka. Bafuna nje ukhula kunye namanzi anzulu.
Ezi ntlanzi ziye iminyaka yobomi phakathi kwama-25 nama-50 eminyaka. Kuxhomekeka kwimeko yezendalo ezikhoyo, zinokuhlala ixesha elide okanye ezimfutshane. Abafazi ngokubanzi baphila ixesha elide kunamadoda.
Ngombulelo kubukhulu bazo kunye nokumila kwazo, ezi zilwanyana azinazo naziphi na izilwanyana ezizingelayo kwindawo yazo yokuhlala. Xa zitshotshiwe ukuba kunyanzelekile Lumka ne-alligator yaseMelika, kuba bayayithanda intlanzi yengwenya besebancinci.
Xa intlanzi eqandusayo iqanduselwa eqandeni, imibungu encinci kuphela eyi-2,5 cm ubude. Zibuthathaka kakhulu kwaye zibhityile. Bangashukuma ngenxa yentshukumo eyenziwa ngumsonto onomsila, nangona le filament ingahlali ixesha elide. Ayinangxaki zokukhula, kuba iyenza ngesantya esiphezulu. Iminyaka emi-2 ubudala, singafumana iisampulu zabantu abadala ngokupheleleyo.
Nangona iimazi zilawula ukuba nobungakanani obukhulu bokugqibela, iinkunzi ziyakwazi ukukhula kwaye zikhule kwangoko. Mhlawumbi esi sesona sizathu sokuba babe nexesha elifutshane lobomi. Ngelixa abesilisa bakhula ngama-48 cm ngonyaka, umntu obhinqileyo ukhula kuphela kumyinge wama-38 cm.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nentlanzi yengwenya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yengwenya